सेल्फ क्वारेन्टाइनमा यसरी गर्न सकिन्छ माइन्ड म्यानेजमेन्ट
राधिका कल्पित काठमाडाैं, १२ चैत
हाल फैलिइरहेको कोभिड–१९ अर्थात नोबेल कोरोना भाइरस महामारी र यसले निम्त्याएको विश्वव्यापी चुनौती र संकट शायद दोस्राे विश्वयुद्धले निम्त्याएको त्रासभन्दा पनि उच्च सन्त्रासयुक्त विषय र घटना हो ।
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल भनिएको छिमेकी राष्ट्र चीन ठूलो चुनौतीको सामना गरेर अब सन्त्रासमुक्त हुँदै छ भने यसको उद्गम देशमा भन्दा जहाँ–जहाँ यो महामारी पुग्यो र फैलियो त्यहाँ अत्यन्तै भयावह स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ ।
विश्वभर के के भइराखेको छ र कस्तो स्थितिमा गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा त सारालाई अवगत नै छ । मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषयचाहिँ थोरै फरक छ ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– उपचारभन्दा रोकथाम नै सर्वोत्तम उपाय हो । अझ नेपालजस्तो देशमा त अर्को विकल्प नै छैन ।
हालसम्मका अध्ययन र तथ्यले देखाएअनुसार रोग फैलिन नदिने र जोगिने एउटै उपाय भनेको ‘सोसल सेक्लुजन’ हो अर्थात् घरभित्रै बसेर अरूको सम्पर्कबाट टाढा रहनु या सामाजिक दूरी कायम राख्नु हो ।
तर आइसोलेसन शहरी जनतालाई बहुत कठिन कार्य हो । एकातिर रोगसँग जुध्ने चुनौती त छँदै छ । अर्कोतर्फ यो समय लामो अवधिसम्म कायम रहेमा यसले निम्त्याउने दुरगामी मानसिक र मनोवैज्ञानिक असरका विषयमा थोरै चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।
हो, देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । कठिन समय भनेको सम्झौतामा बाँच्नुपर्ने समय हो ।
सामान्य दिनचर्यामा परिवर्तन हुनु, रूटिनहरू भताभुङ्ग हुनु, आर्थिक र सामाजिक संरचनाहरू भताभुङ्ग हुनु नै यसका आफ्ना विशेषता हुन् ।
महामारीमा आफ्ना र आफन्तको ज्यान जोगिनु नै मुख्य कुरा हो । यो समयमा नकारात्मक कुरा मात्र सोचेर अनावश्यक तनाव लिएर झन शरीरमा भएको ऊर्जा र मनोबल गिराउने काम गर्नु अत्यन्त मूर्खतापूर्ण काम हो ।
संकट भनेको केही समयका लागि आउने हो र प्रकृतिले मान्छेको परीक्षा लिन र परीक्षण गर्न परापूर्वकालदेखि बेलाबेला आइरहेकै छ र यसले मान्छेलाई आफ्ना कमजोरीहरू र सीमितताहरूको महसुस दिलाएर जान्छ ।
हो सम्पूर्ण देश क्वारेन्टाइनमा छ । यो समय भनेको संयम भएर आफू जोगिनु र अरूलाई पनि सकभर जोगाउन प्रयास गर्नु हो । यो अवस्था एक दुई हप्ता या महिनौँ रहन पनि सक्छ । चाँडै हराएर जान पनि सक्छ ।
हरेक मानिसका आ–आफ्नै समस्या छन् । कसैका धेरै होलान् कसैका थोरै । धेरैका व्यवसाय बन्द भएका छन्, घरभाडा कसरी तिर्ने होला भन्ने तनाव छ ।
कसैलाई भाडामा चलाएको सवारी साधन छ । दिनभर एक रूपैयाँ नकमाए पनि सम्झौताअनुरूप साहुलाई किस्ता तिर्नैपर्ने हुन्छ, तिनको के गति होला ? बाटोमा नाङ्लोमा चुरोट, सुपारी र गुट्खा बेचेर, सडकमा चिया या अन्य सामान बेचेर भरे नुन–तेल किन्नेको के गति होला ?
आकाशे पुलमा गीत गाएर दिनभरिमा एक छाक कमाउने ती दृष्टिविहीन दम्पतीले के खालान् ? घाटा कसलाई भएको छैन ? नोक्सान कसको भएको छैन ? कसकाे लगानी जोखिममा छैन ?
मलाई मात्रै यस्तो भयो भन्ने नसोचौँ । आकाश नै खस्यो भने त सबैलाई थिच्ने उत्तिकै हो । सानो लगानीको सानो घाटा, ठूलालाई ठूलो घाटा छ ।
विषम प्रकृति र प्रकोकसँग हामी जुध्नैपर्छ । महामारीले मलाई केही नगर भनेर सुन्दैन, मृत्युले यता नआइज भनेर टेर्दैन । यो त तपाईं हाम्रो क्षमताबाहिरको कुरा न हो र तनाव यसको उपचार पनि त पटक्कै होइन ।
कमसेकम यो सम्झेर खुसी हौऔँ कि हामीले आफ्ना आफन्त या परिवार गुमाएका छैनौँ । यो सोचौँ कि हामी त्यो भाग्यमानीमध्येका हाैँ, जो परिवारका सबै सदस्यसँगै छौँ या कसैले यो सोच्नुस् कि जहाँ भए पनि आफ्ना परिवारका सदस्य या आफन्त सकुशल छन् ।
हामीमध्ये कतिका छोराछोरी चीन, स्पेन, बेलायत, रूसलगायत अति प्रभावित र जोखिमयुक्त ठाउँमा छन्, के हुने हो र कसो हुने हो भन्ने चिन्ताले निद्रा लागिरहेको छैन, भोक लागिरहेको छैन ।
तर यो सम्झेर मनलाई ढाडस दिनुस् कि तपाईं हाम्रा नातेदार या सन्तान हामीकहाँ भन्दा स्राेत र साधन भएको ठाउँमा छन् । फेरि सँगै भए पनि सुरक्षित हुनेछौंँ भन्ने कुनै ठेगान पनि त छैन ।
भर्खरैदेखि फाट्टफुट्ट संक्रमणका केसहरू भेटिँदै छन् । भोलि कस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो, थाहा छैन । त्रास त छ नि, तर हाम्रो हातमा पनि त छैन । चिन्ता त्यसको रोकथाम हाेइन, यो संयमको समय हो ।
धन त आज छ भोलि छैन । स्वास्थ्य र शरीर रहे त धन भोलि पनि कमाउन सकिन्छ तर ज्यानै गए भोलि पछुताएर के काम ।
पृथ्वीमा प्रलय भए त सहनुपर्छ भने कमसेकम प्रलय हुन लागेको त छैन नि । प्रकोप न हो, योसँग जुध्नु नै छ, जुध्नु भनेको सिरक ओडेर सुतेजस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र ? ‘लाइफ इज नट अ बेड अफ रोजेज’ भन्ने अंग्रेजी उखानै छ ।
तपाईं हाम्रो त आर्थिक घाटा मात्र हो । भोलि फेरि त्यो घाटा पूर्ति गर्न सकिएला । हामीमध्ये धेरै एटीएममा गएर २्/४ पैसा निकाल्न सक्ने हैसियतका छौँ होला । १/२ हप्तालाई पुग्ने खाद्यान्न, ग्यास र तेल नुनको जोहो गरेर राखेका नि हौँला ।
एकछिन ती एक छाक पनि जोहो गरेर राख्न नसक्नेहरूका बारेमा पनि सोचौँ । सरकारले त्यो वर्ग र समुदायका लागि के योजना बनाएको छ, त्यो अर्को चिन्ता र सरोकारको पाटो हो । हामी चिन्तित छौँ तर तपाईं हामीले चिन्ता गर्दैमा समस्याको हल निस्किँदैन ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् डर, त्रास र चिन्ताका कारण मुटुका रोगीको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । हजारौँ मानिस मानसिक रोग र डिप्रेसनको शिकार भएका थिए ।
जब एउटै कुरा मनमा एकोहोरो रूपमा आइरहन्छ, दिमाग र मुटुमा त्यसले भार पारिरहन्छ, तब मानसिक रोग या डिप्रेसन र मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने जब हामी बढी मानसिक तनाव लिन्छौँ, तब मुटुको धड्कन बढ्ने, ब्लड प्रेसर बढ्ने, सुगर लेभल बढ्ने, निद्रा नलाग्ने, छटपटी बढ्ने र कसैकसैलाई नियन्त्रणबाहिर भई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले यो परीक्षाको घडीमा संयमित हुन अति आवश्यक छ ।
सोचौँ त यो स्थितिमा अस्पताल भर्ना भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने परिवारका सबै सदस्य लगायत सबैमा तनाव र जोखिन अवस्था आउन सक्छ त्यसैले यो परीक्षाको घडीमा संयमित हुन अति आवश्यक छ ।
रोकथामका उपायहरू निःसर्त अपनाउनुपर्छ । सरकारले चालेका कदम र निर्देशनमा सहकार्य गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर महामारी नआउँदै या आइसकेपछि पनि चाहिनेभन्दा बढी आत्तियौँ भने झन् विकराल स्थिति नआऊला भन्न सकिँदैन ।
मानसिक स्वास्थ्यमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिम न्यून गर्नका लागि यो ‘लक डाउन’ र भोलि आउन सक्ने क्वारेन्टाइनमा बस्दा विशेष गरी शहरी इलाकामा बस्ने मान्छेहरूमा तनाव कम गर्न आफ्नो रूचिअनुसारको किताब पढ्ने गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सकिन्छ भने केही लेख्ने, गफ गर्ने, अरू बेला गर्न नपाएका घरायसी काम गरेर समय सदुपयोग गर्ने, टीभी हेर्ने, गीत सुन्ने, बाहिर हिँडडुल गर्ने अवस्था नहुँदा घरभित्र नाच्ने, खेल्ने, योगा गर्ने, ध्यान गर्ने, करेसातिर काम गर्ने, जीवन र दर्शनका पुस्तक पढ्ने गर्न सकिन्छ ।
इन्टरनेट भएमा युटुबबाट प्रवचन सुन्न सकिन्छ । सिनेमा हेर्न सकिन्छ तर जसले लेख्न र पढ्न सक्नु हुन्न, उहाँहरूले रेडियोमा या सम्भव हुनेलाई युटुबमा हेरेर पनि आफूलाई मानसिक रूपमा तनावमुक्त राख्न सकिन्छ ।
मुटु कमजोर हुने मान्छेहरूले सन्त्रास फैलाउने समाचार र दृश्यबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ, अन्यथा यसले झन् तनाव निम्त्याउन सक्छ ।
अब मनका लागि केही गरौँ, सचेत बनौँ । रोग लागिसकेपछि उपचार कठिन छ । हाम्रो देशमा उपचार सर्वसुलभ पनि छैन । महामारी झैँ फैलियो भने चीन, इटाली, रूस, फ्रान्सजस्ता स्राेत, साधन, शक्ति र सीप भएका मुलुकमा त नियन्त्रणबाहिर छ भने नेपालमा त त्यो स्थिति आयो भने सम्हाल्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन ।
आजैबाट आफूलाई परिवर्तन गरौँ । यो सकसपूर्ण समयसँग सिँगौरी खेल्दै बाँच्न सक्यौँ भने अरू कुरा त गौण हुन् । चुनौती मान्छेलाई नै आउने हो र संघर्ष पनि मान्छेले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा बबुरो पक्षीले त हावाहुरीले गुँड भत्काएर लैजाँदा कत्ति चोटि गुँड बनाएको देखेकै छौँ । गौथलीले घर बनाउँदा कति चोटि भत्केको देखेकै छौँ, फुल उडाएर लगेको देखेका छौं तर हिम्मत हारेको हुँदैन । न त उसले हार खाएर गुँड बनाउन र फुल पार्न नै छोड्छ ।
हामी त सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी मान्छे हौँ । संयमित बनौँ, सहकार्य गरौँ । फजुल खर्च कम गरौँ, बरू त्यसबाट केही अंश बचाएर गच्छेअनुसार अति विपन्नलाई सहयोग गरौँ ।
आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऔँ । सामाजिक दूरी बढाऔँ, भावनात्मक र मानवीय दूरी घटाऔँ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, १२:३४:००